कति मिनेटको शारीरिक सम्बन्धमा मिल्छ यौन सन्तुष्टि ? - समायोजन खबर
कति मिनेटको शारीरिक सम्बन्धमा मिल्छ यौन सन्तुष्टि ?
महिला र पुरुषबीच शारीरिक सम्बन्ध राख्दा चरम यौन आनन्द प्राप्त गर्नका लागि एक अध्ययनको अनुसार उपयुक्त समय २४ मिनेट रहेको देखाएको छ । तर पनि उक्त अनुसन्धान अनुसार प्रायजसो शारीरिक सम्पर्क राख्दा औषत १८ मिनेटमैं स्खलित हुने जनाइएको छ ।
केहि महिला अथवा पुरुषहरुमा शारीरिक सम्पर्क गर्दा यो भन्दा पनि छिट्टै स्खलन हुने अनुशन्धान बताउछ । उक्त अध्ययनमा जनाइए अनुसार यौनसम्पर्कमा पूर्व कामक्रिडा नहुनु र पुरुषहरुको अंग पूर्णरुपमा तयार भएको नहुनु छिटो स्खलनको कारण बताइएकोछ ।
जसले गर्दा प्रत्येक पाँचजना महिलाहरुमा एकजना महिलाले यौन सन्तुष्टि नपाउने गरेको अध्ययनले जनाइएको छ । महिलाहरु शारीरिक सम्बन्धको लागि तयार हुन अर्थात पूर्णरुपमा उत्तेजित हुनकोलागी १५ मिनेट जति समय लाग्ने गरेको पाइएको छ । एजेन्सी
नेपालमा काेराेना सङ्क्रमितकाे सङ्ख्या ५०७ पुग्यो